We.com.mm - EX ကိုသတိရပြီး text ပို့မယ့်အစား လုပ်သင့်တဲ့အချက် ( ၉ ) ချက်
EX ကိုသတိရပြီး text ပို့မယ့်အစား လုပ်သင့်တဲ့အချက် ( ၉ ) ချက်
လူတိုင်းရဲ့ ဘဝမှာ ex ဆိုတာ ရှိကြစမြဲပါပဲ။
ဒါကို ငါကတော့ ကံဆိုးလိုက်လေခြင်း ၊ ငါတစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်ရတယ်လို့တော့ မင်း မထင်လိုက်ပါနဲ့။
သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ အဆင်မပြေလို့ ပြတ်သွားကြပြီနေပြီ။
ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်ခါမှာ မင်း သူ့ကို text msg ပို့ချင်မိတာရှိတယ်မဟုတ်လား…။
ဝန်ခံပါ ဒါက ရှက်စရာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
အထူးသဖြင့်တော့ သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ပြတ်ထားတာ သိပ်မကြာသေးတဲ့အချိန်.......၊ ဒဏ်ရာတွေမကျက်သေးတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီလူအတွက်ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ခံစားမှုဆိုတာရှိနေတုန်းပဲမဟုတ်ဘူးလား။
လူဆိုတာ သံယောဇဉ်ရယ် အသွေးအသားရယ်နဲ့ရှိတတ်ကြတာမို့ လွယ်လွယ်နဲ့တော့ ဘယ်မေ့နိုင်ပါ့မလဲ။
ဒါဟာ မင်း အမှားမဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့်တော့ သံယောဇဉ်ကြီးတတ်တဲ့သူတွေအဖို့ ပိုခံစားရစမြဲပဲ။
ပြတ်ခါစအချိန်တွေမှာ မင်းအနေနဲ့ အထီးကျန်မယ် ကူကယ်ရာမဲ့နေသလိုခံစားရလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် အထီးကျန်မှုအတွက်နဲ့တော့ မင်းသူ့ဆီကို text မပို့သင့်ဘူး။
text ပို့ခြင်းဖြင့်လည်း ဘာကောင်းကျိုးမှ ရလာစရာအကြောင်းမရှိဘူး ဆိုတာ မင်းလည်း သိနေပြီးသားပဲ။
ဒါကြောင့်မို့လို့ မင်းအားငယ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာ မင်း ဘာလုပ်သင့်သလဲ။ မင်းသူ့ကို text msg ပို့မယ့်အစား… သတိရလွမ်းဆွတ်နေမယ့်အစား …………..
(၁) ရင်ဘတ်ချင်းတူတဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းဆီကို ဖုန်းဆက်ပါ။
ကိုယ်နဲ့ အဆင်မပြေလို့ပြတ်သွားတဲ့သူ (ကိုယ့်ကို မလိုချင်လို့ ထားသွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်) အဲ့လို ရွံစရာကောင်းစရာသတ္တဝါလေးဆီ text ပို့မယ်အစား မင်းသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီသာဖုန်းဆက်လိုက်။
movie date မယ့်အကြောင်းဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း နောက်နေ့တွေ့ကြမယ်ဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ပြောလို့ရတယ်။
သူငယ်ချင်းဆိုတာ ကိုယ့်ဘေးနားမှာ အမြဲရှိနေကြတဲ့သူတွေလေ။ မင်းနာကျင်နေရတဲ့အချိန်တွေမှာလည်း သူတို့တွေက မင်းဘေးနားမှာရှိနေမှာပါ။
(၂) ကိုယ်စားချင်တဲ့ မုန့်တစ်ခုခု လုပ်စားပါ။
ဘာလို့များ ရီးစားဟောင်း ex ဆီ text ပို့ချင်ရတာလဲကွယ်။ မထူးတဲ့ကိစ္စကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ မီးဖိုချောင်ထဲသွားပြီး မုန့်တစ်ခုခု မင်းလုပ်လိုက်ပါ။ ဗိုက်တောင် ဝသေး..။ မုန့်တွေစားလို့ ဝလာမှာတော့ စိတ်မပူနဲ့နော်။ မင်းကြားဖူးလား လူတွေက စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အချိန်မှာ အချိုဓာတ်လိုတယ်တဲ့။ stress များတဲ့အချိန် စိတ်ပင်ပန်းတဲ့အချိန်တွေမှာ ခန္ဓာကိုယ်က သကြားတို့ donut တို့ chocolate တို့စတဲ့ အချိုတွေကို ပိုတောင့်တတတ်တယ်တဲ့။ ကဲ မုန့်လေးလုပ် အချိန်လေးကုန်သွားလို့ ကုန်မှန်းလည်း မသိ နောက်ဗိုက်လဲပြည့်သေး…။
(၃) Social dating site တွေကို ဝင်မွှေနှောက်ကြည့်စို့ ..။
မင်းကို ရီးစားအသစ်ရှာပါလို့ မပြောဘူး…။ မင်းအတွက် အချိန်လိုသေးတယ်ဆိုတာလည်း သိတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုမချစ်လို့ ပြတ်သွားတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက် မင်း ထိုင် ငိုနေမှာလား ??
သူ့ကို text ထိုင်ပို့နေပြီး reply မလာတာကို မင်းတွေ့ရင် မင်းထပ်ပြီးကြေကွဲရမယ် မဟုတ်လား။
ဒါတွေလုပ်နေမယ့်အစား လူတွေနဲ့ များများစကားပြောသင့်တယ်။ မင်းအနေနဲ့ စိတ်ပြေလက်ပျောက် သဘောမျိုး၊
မင်း စိတ်ကိုပေါ့ပါးသွားစေမယ့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစကားလေးတွေနဲ့ လူအသစ်တွေနဲ့ မိတ်ဖွဲ့စကားပြောကြည့်လိုက်ပါ။
(၄) ဖုန်းကိုင် ငုတ်တုတ်မထိုင်ပဲ Gym သွား workout တွေလုပ်ကြစို့။
ဝမ်းနည်းနေတဲ့အခါ အလုပ်သင့်ဆုံးက Gym သွားတာပဲ။
မင်းကြားဖူးလား လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့လူတွေမှာ Happy Hormones လို့ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းဓာတ်တွေ ထွက်သတဲ့။
ကဲ မာဆယ်လေးတွေနဲ့ six pac နဲ့ tonning ဖြစ်နေတဲ့မင်းကို ex မြင်ရင် ???
ဘယ်သူအတွက်မှ မဟုတ်တောင် မင်းအတွက် မင်း လှလှလေးနေနေရမယ်လေ….။ Gym သွားတာ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အထောက်ပံ့ဖြစ်စေတယ်မဟုတ်လား။ အိုကေပါ တကယ်တော့ ဒီထက်တွေးရမှာက ဘယ်သူအတွက်မှ မင်း လှနေစရာမလိုဘူး။
မင်းအတွက်တော့ မင်းလှနေမှဖြစ်မယ် မဟုတ်လား။ လှလှပပကျော့ကျော့မော့မော့လေးနဲ့ နေနေရမယ်လေ။
ရီးစားတစ်ယောက်နဲ့ ပြတ်တာ တစ်ကမ္ဘာပျက်သွားတာမှ မဟုတ်တာ။
လမ်းလျောက်တာကလည်း ကယ်လိုရီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေတဲ့အတွက် ဝိတ်ကျစေနိုင်တယ်။
အပြင်ထွက် လေကောင်းလေသန့်ရှု …ပန်းခြံလေးသွားပြီး လမ်းလျောက်ထွက်လိုက်ပါ။
စိမ်းလန်းတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်က မင်းကို လန်းဆန်းစေမှာပါ။
ညနေတိုင်းပုံမှန်လေး လမ်းလျောက်ပါ မင်းစိတ်တွေ တဖြည်းဖြည်း ကြည်လင်လာမှာပါ။
ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းဖြင့် မင်းမှာ ရှိနေတဲ့ စိတ်သောကတွေကို ခနတဖြုတ်မေ့သွားနိုင်စေတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဖွဲ့လိုက် ချိန်းလို့ရသလို၊ ဘယ်သူမှ မရှိနေလဲ မင်းဟာမင်း အနွေးထည်ထူထူလေးဝတ်၊ popcorn လေး ဘူးယူ၊ lemon juice လေးတစ်ဘူးနဲ့ အေးဆေးဇိမ်လေးနဲ့ သွားကြည့်လို့ရတာပဲ။ တစ်ခါတစ်လေများ လူများရင်တောင် စကားများနေရလို့ ရုပ်ရှင်အရသာတောင် ပျက်သေးတယ်။
အပြင်မထွက်ချင်ရင်တောင် အိမ်မှာပဲ ကိုယ့်ဘာသာ movie time လေးလုပ်ပြီး ကြည့်လို့ရသေးတယ်။
အဲ သိပ်ပြီး Moody ဖြစ်တဲ့ ကားမျိုးတော့ မင်း မကြည့်သင့်ဘူးနော်။ ဘာလို့လဲဆို မင်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်က အားနည်းနေတဲ့အချိန်မှာ ထပ်ပြီး ပူဆွေးရမယ့် စိတ်ညစ်ရမယ့်ကားမျိုးတော့ မင်းရှောင်သင့်တယ်။
(၇) ကိုယ့်ကိုကိုယ် အလှပဆုံးလေးနေ
ခုခေတ်ကြီးမှာ များလိုက်တဲ့ Beauty salon တွေ၊ ပေါလိုက်တဲ့ Spa တွေ၊ နေရာအနှံ့မှာရှိတဲ့ လက်သည်းပြင်ဆိုင်တွေ…။
တစ်နေ့ တစ်ဆိုင်ပဲ သွားပါအုံး… ။ဘာလို့များ ကိုယ့် မချစ်တဲ့သူအတွက် တွေး ဆွေး ငေး နေမှာလဲ။
မင်း အရင်ဆုံးလုပ်သင့်တာ ဆံပင်ပုံစံလေး ပြောင်းသင့်တယ်။
ဆံပင်အရောင်လေးဆိုး၊ လက်သည်းခြေသည်းလေးလုပ်၊ ပေါင်းလေးတင်နဲ့ သာယာလိုက်တာ။
တစ်ယောက်ထဲရှိတယ်ဆိုတိုင်း စိတ်ညစ်စရာမှ မဟုတ်ဘဲ။
လှလှလေးဖြစ်နေတဲ့ မင်းကို ex အမြင်ခံမလား။ အသည်းတွေကွဲ ပုံဆိုးပန်းဆိုးတွေနဲ့ ရုပ်ဆိုးမဖြစ်နေတဲ့ မင်းကို အမြင်ခံမလားဆိုတာ မင်းသဘောပါ။
မင်းမှာ သူ့ကြောင့် အိပ်ရေးပျက်ခဲ့ရတာတွေ များနေပြီ မဟုတ်လား ။မင်း စိတ်တွေ ပင်ပန်းခဲ့ရပြီးပြီ။
အိပ်ရေးပျက်ခဲ့တဲ့ ညတွေ....အိပ်မပျော်တဲ့ညတွေရယ်.... ဘယ်လောက်များခဲ့ပြီလဲဆိုတာ မင်း အသိဆုံးပါ။
အခုတော့ မင်းအိပ်ရေး၀၀ အိပ်သင့်နေတဲ့အချိန်ရောက်ပြီ။
အိပ်ရေး ဝမှ ပြည့်တင်းတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ လှနေမှာပေါ့။ စိတ်ညစ်စရာတွေ ဖယ်ပြီး နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်
အိပ်လိုက်ပါ။ နိုးလာရင် အားအင်အပြည့်နဲ့ မင်း လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကို လုပ်ရအုံးမယ်လေ။
(၉) မင်း ဖုန်းထဲကနေ သူ့နံမည်ကို delete လိုက်ပါ။
လူချင်းတောင် ပြတ်နေမှတော့ ဖုန်းထဲမှာလည်း ဘာလို့များ နေရာပေးပြီးထားနေတော့မှာလဲ ?
သူက မင်းရဲ့ ex ပါ….မင်းရဲ့ လက်ရှိနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်တော့တဲ့သူတစ်ယောက်၊ မင်းရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ဆိုတာ ပိုတောင်ဝေးပေါ့။
ဒါကို မင်းလက်ခံနိုင်ရမယ်။ အခုပဲ သူ့နံမည်ကို ဖုန်းထဲကနေဖျက်လိုက်ပါ။
အဲ တဖြည်းဖြည်း မင်းဦးနှောက်ထဲကနေပါ ထုတ်ပစ်ဖို့လည်း လိုတယ်နော်။
မင်းသူ့ဆီကို text တွေပို့၊ ပြီးရင် မပို့လိုက်ရင်ကောင်းသားဆိုပြီး နောင်တတွေရနဲ့ ..... အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လား။
ကဲ ဒီနေ့ကစပြီး နောက်ထပ် ဘာ text မှလည်း မပို့ပဲ ဒီအချက်တွေလိုက်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။
အသည်းဆိုတာ ခဏပဲကွဲတတ်တာ တစ်ချိန်ချိန်ကျ ဒါဟာလည်း ရယ်စရာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ အားတင်းထားပါ။
ရော့ခ်သီချင်းကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေကို ချစ်သူတော်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်းများ
အရင်ရည်းစားဟောင်းက ဖုန်းခေါ်လာရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိတဲ့ ပျိုမေတို့အတွက်…
ထားခဲ့ခံရပေမယ့်လည်း အချိန်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာ အရင်လိုပြန်ဖြစ်စေမယ့်နည်းလမ်း
Coronavirus ဖူးစာ သို့မဟုတ် Home Stay နေရင်း ချစ်ကြိုးသွယ်မိခဲ့သူနှစ်ဦး
10 months ago by Katie Scarlett
ပျားတုတ်ခံကုသနည်းက လိင်အင်္ဂါကို ထာဝရကြီးထွားစေနိုင်
ကိုယ့်ရဲ့ Facebook Profile ကိုဘယ်သူတွေခိုးပြီးကြည့်နေသလဲ
လွယ်မလိုနဲ့ခက် တိမ်မယောင်နဲ့နက်တဲ့ ငါးခြောက်ဖုတ်နည်း အမှန်
လမ်းခွဲဖို့ပြောလာတဲ့ ချစ်သူကို ဒေါသထွက်ပြီး ပယ်ပယ်နယ်နယ်ထိုးခဲ့တဲ့ အမျိုးသား